Kuo inoratidza kuti tichava neMacBook Air ine miniLED na2022 | Ndinobva mac
Kuo inoratidza kuti tichava neMacBook Air ine miniLED na2022
Runyerekupe pamusoro pekuuya kwema miniLED mapaneru kuMac angave aine MacBook Air uye ichi chinhu chinoratidzika kunge chiri pachena, havasi kuzowedzera rudzi urwu rwezvikwiriso mune yekutanga MacBook Pro. Ichi, chinova chakavanzika chakavhurika, ichiri nyaya yemakuhwa pamusoro peinogona kusvika zuva, mune ino kesi muongorori Ming-Chi Kuo anoti Apple inogona kuwedzera iyo miniLED skrini yegore rinotevera paMacBook Airs uye skrini yeOLED paPad Airs.
Makuhwa eMac ane miniLED anogara aripo
Kwemwedzi yakati wandei izvozvi, runyerekupe nezvekuuya kweaya miniLED mapaneru kuMacs anogara aripo uye pakupedzisira zvinoita sekunge kuri pachena kuti inozopedzisira yaitika. Izvo isu zvatisinganyatso kujekesa nezvazvo izuva rekuvhurwa kwayo uye nderekuti kune mavhiki umo zvinoita kunge kuvhurwa kwepedyo uye mamwe mavhiki atinotaurirwa kuti kusvika gore rinouya hapana. Kazhinji lIro runyerekupe nderenguva refu kune miniLED skrini, asi hapana mazuva chaiwo.
Kune rimwe divi, zvinoita sekunge iyo iPad Mhepo ndiyo ichave yekutanga kukwidza maOLED skrini maererano nezvakataurwa naKoo. Iyi iPad Mhepo yaizosvikawo mukati megore rinouya uye sekutaura kwatamboita imwe nguva rudzi urwu rwezvikwiriso runofanira kuvandudzwa pamaappleti eApple sezvo izvozvi skrini zvirinani pane iyo iPad kunyangwe isiri OLED. Isu tinoshuvira kuona kuti miniLED inoshanda sei kunyanya paMacs, chiri chinhu chinogona kunyatsonakidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » MacBook Air » Kuo inoratidza kuti tichava neMacBook Air ine miniLED na2022
Intel inoenderera mberi nemushandirapamwe wayo kurwisa maMac uye inosaina Justin Long
Podcast 12 × 23: Sala zvakanaka kuPambaPod